Soo degso barnaamijka Pilatus PC-7 V2.0 FSX - Rikoooo
Qaabka duulimaadka waa mid macquul ah, cockpit-ka dalwaddu waa dhameystiran tahay, waa heer sare add-on. Waxaa ku jira sideed dayactir iyo laba moodel oo kala ah: Ciidanka Cirka Switzerland, Ciidanka Difaaca Botswana, Dhirta Alaska Gobolka (suurtagalnimada in lagu ridayo taangiyada), Ciidamada Cirka ee Austaralia, Ciidamada Cirka Abu Dhabi (UAE), Diiwaanka Madaniga Mareykanka (Benpuppy Tribute), Ciidamada Cirka ee Uruguay, Birta birta ah.
Tababaraha Pilatus PC-7 Turbo waa garoon diyaaradeed oo hooseeya, kaas oo soo saaray Pilatus Aircraft ee Switzerland. Diyaaraduhu waxay awoodaan dhammaan hawlaha tababarka aasaasiga ah oo ay ka mid yihiin aerobatics, qalab, tikniko iyo duulimaad habeen. Waxaa lagu soo xulay in ka badan labaatan ciidan oo ah tababaraha abbaarta ah - tan iyo markii la bilaabay diyaaradda diyaaradaha ee 1978 oo ku dhow 500 ayaa la iibiyay, iyada oo intooda badan ay adeeggaan.
In ka badan hal malyan saacadood ayaa loo duubay PC-7s aduunka oo dhan.